Somaliland iyo Taiwan: Muxuu yahay heshiiska ay kala saxiixdeen? | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Somaliland iyo Taiwan: Muxuu yahay heshiiska ay kala saxiixdeen?
Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaannida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo Taiwan ayaa kala saxiixxday heshiis iskaashi oo la xidhiidha Shidaalka iyo Macdanta.
Somaliland iyo Taiwan wadahadalladodda
“Somaliland waxay leedahay fursado maal-gashi weyn oo lagu samayn karo kaydka shidaalka iyo gaaska aan weli laga faa’iidaysan,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda oo la hadlayay madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland Ciise Kayd Maxamuud ayaa intaasi ku daray in deegaannada Somaliland sidoo kale ay leedahay macdan laga faaideysan karo.
“Dhinaca macdanta Somaliland waxa ay leedahay fursado maalgashi aad u weyn oo ay ka mid yihiin kaydka, Saliidda iyo Gaaska iyo sidoo kale dhuxusha oo si fudud loo sahamin karo,” ayuu yiri.
Madaxwaynaha jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ayaa dhankeeda sheegtay in Taiwan ay muhiimad gaar ah u leedahay Somaliland.
“Somaliland hadda waa goob muhiim ah oo ku taal Bariga Afrika oo ah mashruuca Taiwan ee Afrika,” ayay tiri Mrs Tsai.
Taiwan ayaa xoogga saaraysay sanooyiinkii u dambeeyay xiriir dublamaasiyadeed oo ay la yeelato dalalka qaaradda Afrika, iyadoo Eswatini oo kaliya ay hadda xiriir buuxa la leedahay jasiiradda.
Shiinaha ayaa cadaadis ku saaray dalalka in aysan la xiriirin Taiwan maadaamaa ay tahay qeyb ka mid ah dhul waynaha Shiinaha.
Taiwan ayaa roog cas u fidisay Somaliland oo ah saaxiib cusub oo ay isku mowqif yihiin oo ay ku yeelatay geeska Afrika.
Taiwan iyo Somaliland labaduba waa laba maamul oo aan la aqoonsaneyn. Sannadkii 2020-kii ayay ahayd markii ugu horeysay oo labada dhinac ay xiriir wada sameeyaan.
Taiwan ayaa bishii August 2020, safaarad ka furatay Magaalada Hargeysa halka Somaliland ay 9-kii September ee isla sanadkaas ay magaalada Taipei ka furteen xafiis matalaad.
Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ka dib dagaalkii sokeeye ee 1991-dii. Balse tan iyo xilligaasi Somaliland ma aysan helin wax aqoonsi ah.
Xiisadaha ayaa kordhay sanadihii la soo dhaafay, Beijing-na kama aysan saarin adeegsiga xoogga si jasiiradda dib loogu celiyo maamulka dhul weynaha Shiinaha
Previous articleMadaxwayne Aad Moodo in Ladulmiyay Ayaanu U Tagnay Oo..”Fasal Cali Waraabe
Next articleDeg Deg, Gudidii Diiwaangalinta Ururada oo madaxwaynaha hortiisa lagu dhaariyay